Kitra - "THB Champions League" :: Mitovy isa ny Fosa Juniors, AS Adema Zanakala FC ary Cnaps Sport • AoRaha
Kitra – « THB Champions League » Mitovy isa ny Fosa Juniors, AS Adema Zanakala FC ary Cnaps Sport
Mitarika eo amin’ny filaharana vonjimaika eo amin’ ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, Diviziona nasionaly faharoa, ny Fosa Juniors (Boeny), Zanakala FC (Matsiatra Ambony), AS Adema (Analamanga) ary ny Cnaps Sport (Itasy), samy manana isa efatra avy. Tontosa tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo ny andro faharoa ho an’ity fifaninanana ity. Manana isa roa manaraka azy ireo kosa ny ekipan’ny AS Jet Mada (Itasy) sy ny Ajesaia (Bongolava). Samy mbola tsy nahazo isa kosa satria resy foana, ny ekipan’ny FCA Ilakaka (Ihorombe) sy ny 3FB Toliara (Atsimo Andrefana).
Ho an’ny teto Antanana­rivo dia voatanan’ny AS Jet Mada tamin’ny ady sahala, 2 sy 2, ny Fosa Juniors, tetsy amin’ ny kianjaben’i Mahamasina. Nitarika tamin’ny alalan’ny isa 2 noho 0 ny ekipa faha­roan’Itasy, tamin’ity lalao notanterahina ny sabotsy lasa teo ity. Efa tany amin’ny minitra faha-68 sy faha-76 vao naha­vita nanasahala ny ekipan’i Bob Kootwijk.
Teny Vontovorona indray dia nivoaka ho mpandresy, teo anatrehan’ny FCA Ilakaka, tamin’ny isa 5 noho 1 ny ekipan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps Sport). Tany amin’
ny kianjan’Ampasambazaha Fianarantsoa kosa dia nisa­raka ady sahala, 1 sy 1, ny ekipan’ny Zanakala FC sy ny FCA Ilakaka.Tamin’ny isa 2 noho 1 kosa no nivoahan’ny AS Adema ho mpandresy manoloana ny ekipan’ny 3FB Toliara, tany amin’ny kianjan’Andaboly. Nanokatra ny isa i Aro, saingy teo amin’ny fizaram-potoana voalohany ihany dia voa­sahalan’ny mpampiantrano ny isa. Tany amin’ny fizaram-potoana faharoa kosa no nisintaka an’io ady sahala io ny ekipan’ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara, tamin’ny alalan’i Ruffin.Hitohy, afaka tapa-bolana indray ny andro fahatelo ho an’ity fifaninanana ity.
Lomano Mbola lavitra an’i Madagasikara ny medaly
Baolina kitra Mitaky fitoniana ny lalaon’ny Barea amin’i Seychelles
Fitsapana ireo Makis
Baolina kitra – « CAN 2019 » :: Miankina amin’ny lalao voalohany ny ho avin’ny Barea